भिएस निकेतनका संस्थापक प्रिन्सिपल डा. पोखरेलको निधन ::Nepali TV
You are here : Home News भिएस निकेतनका संस्थापक प्रिन्सिपल डा. पोखरेलको निधन
भिएस निकेतनका संस्थापक प्रिन्सिपल डा. पोखरेलको निधन
निवर्तमान सांसद तथा शिक्षाविद् डा बाबुराम पोखरेलको आइतवार निधन भएको छ । मुटुरोगबाट पीडित डा पोखरेल आइतवार बिहान ६:०० बजे शौचालयमा लडेपछि उनलाई उपचारका लागि बिहान ७:१५ बजे नर्भिक अस्पताल पुर्याउँदा निधन भइसकेको अस्पतालले जनाएको छ।
प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष ६७ वर्षीय डा पोखरेलले मुटुको शल्यक्रिया गरी उपचार गराइरहेको प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले जानकारी दिए। विनायकसुधा (भिएस) निकेतनका संस्थापक प्रिन्सिपल उनी विसं २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) बाट समानुपातिक सभासद् बनेका थिए। यो समाचार कान्तिपुरले लेखेको थियो